Daffodil (ဒက်ဖဒေးလ် ခေါ် နှင်းပန်းဝါ) - Hello Sayarwon
Daffodil (ဒက်ဖဒေးလ် ခေါ် နှင်းပန်းဝါ)
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Daffodil (ဒက်ဖဒေးလ် ခေါ် နှင်းပန်းဝါ)
Daffodil (ဒက်ဖဒေးလ် ခေါ် နှင်းပန်းဝါ) ကဘာလဲ။
ဒက်ဖဒေးလ် ခေါ် နှင်းပန်းဝါ ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
ဘေးကင်းမကင်းစိုးရိမ်နေရင်းနဲ့တောင်မှ နှင်းပန်းဝါကို ကြက်ညှာချောင်းဆိုး၊ ရင်ကြပ်ခြင်း၊ အအေးမိခြင်း တွေအတွက် သုံးတတ်ကြတယ်။ အန်စေဖို့အတွက်လည်း သုံးကြပါတယ်။
ထိုဆေးဘက်ဝင်အပင်လုပ်လုပ်ပုံနဲ့ပတ်သတ်လို့ လုံလောက်တဲ့လေ့လာမှုတွေမရှိသေးပါဘူး။ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ။် သို့ပေမယ့် နှင်းပန်းဝါမှပါတဲ့ polysaccharide နဲ့ lectin ခေါ်ပစ္စည်းတွေက HIV ကိုတိုက်နိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိတယ်လို့တော့ တချို့လေ့လာမှုတွေကဆိုပါတယ်။ lectin တွေက ကင်ဆာအတွက်တော့ အဆိပ်ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒက်ဖဒေးလ် ခေါ် နှင်းပန်းဝါ အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ပန်းနဲ့အဖူးတွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ သတိကြီးကြီးထားရပါလိမ့်မယ်။ ပြင်းထန်တဲ့၊ သေပင်သေစေနိုင်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။
ဒါကြောင့် တတ်ကျွမ်းတဲ့ပညာရှင်၊ ဆရာဝန်က မညွှန်းမချင်း ထိုနှင်းပန်းဝါနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို မသုံးပါနဲ့။
ဒက်ဖဒေးလ် ခေါ် နှင်းပန်းဝါ က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
နှင်းပန်းဝါကို ကိုယ်ဝန်သည်၊ နို့တိုက်မိခင်နဲ့ ကလေးတွေအတွက် မသုံးသင့်ပါဘူး။ ထိုပန်းနဲ့ ဓါတ်မတည့်သူတွေလည်း မသုံးသင့်ပါဘူး။
နှင်းပန်းဝါရဲ့ ပန်းတွေ၊ အဖူးတွေကိုလည်း မသုံးသင့်ပါဘူး။ ထိုကနေ ပြင်းထန်တဲ့၊ သေပင်သေစေနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တွေ ဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။
ဒက်ဖဒေးလ် ခေါ် နှင်းပန်းဝါ ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
ထိတွေ့မှုကိုမသိခြင်း (လေဖြတ်ခြင်း)၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော အာရုံခံစားရခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း
အဖူးများမှ သွေးကြောများပိပြားကာ ပိတ်သွားစေနိုင်ခြင်း
ပါးစပ်၊ လျှာ၊ လည်ချောင်း ရောင်ရမ်းခြင်း
ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ မစားနိုင်ခြင်း၊ တံတွေးထွက်ခြင်း
ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်း၊ ယားယံခြင်း
လူတိုင်းက ထိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေမရပါဘူး။ ဖော်ပြထားတာတွေထဲမပါတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒက်ဖဒေးလ် ခေါ် နှင်းပန်းဝါ ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
နှင်းပန်းဝါက အစားအစာများမှရသော သတ္ထုဓါတ်စုပ်ယူမှုကို လျှော့ချပါတယ်။
ဒက်ဖဒေးလ် ခေါ် နှင်းပန်းဝါ အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
ဒက်ဖဒေးလ် ခေါ် နှင်းပန်းဝါ က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
အမှုန့်၊ အဆီအနှစ် အနေဖြင့် ထုတ်ယူရရှိပါတယ်။
Skidmore-Roth, Linda. Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print version. Page 219.
Daffodil. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-79-daffodil.aspx?activeingredientid=79&activeingredientname=daffodil. Assessed August 7, 2016
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, ကျန်းမာရေးအားလုံး, ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ
အစားစားရင်း အသက်ရှူရခက်တဲ့အခါ ဒါတွေလုပ်ပါ။ ။
ကလေးတွေမှာ ဖြစ်တဲ့ Cyanosis ( ပြာနှမ်းခြင်း ) အကြောင်း သိကောင်းစရာများ ။ ။